Niamh Algar – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Censor (2021) Unicode 2021 Horror ဇာတ်ကားလေးကြည့်ချင်သူတွေအတွက် imdb 5.9 အထိရထားတဲ့ Censor (2021) ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ငယ်တုန်းကညီမပျောက်ဆုံးခဲဖူးတဲ့ ရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်သူတစ်ယောက် ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာတွေတည်းဖြတ်ရင်း ရုပ်ရှင်လား အပြင်မှာတကယ်ဖြစ်နေတာလား ဆိုတာ တစ်ဖြည်းဖြည်း Psycho ဖြစ်လာရင်း ဘယ်လိုတွေအဆုံးသတ်မယ်ဆိုတာကိုတော့ . . . ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Amanda James ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi 2021 Horror ဇာတ္ကားေလးၾကည့္ခ်င္သူေတြအတြက္ imdb 5.9 အထိရထားတဲ့ Censor (2021) ကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ငယ္တုန္းကညီမေပ်ာက္ဆုံးခဲဖူးတဲ့ ႐ုပ္ရွင္တည္းျဖတ္သူတစ္ေယာက္ ႐ုပ္ရွင္ဆင္ဆာေတြတည္းျဖတ္ရင္း ႐ုပ္ရွင္လား အျပင္မွာတကယ္ျဖစ္ေနတာလား ဆိုတာ တစ္ျဖည္းျဖည္း Psycho ျဖစ္လာရင္း ဘယ္လိုေတြအဆုံးသတ္မယ္ဆိုတာကိုေတာ့ . . . ဒီဇာတ္ကားကိုဘာသာျပန္ေပးသူကေတာ့ Amanda James ျဖစ္ပါတယ္
IMDB: 5.9/10 1371 votes
Wrath of Man (2021) Unicode ဂျေဆန် စတေသန်ကြီးရဲ့ အက်ရှင်ကား အကြမ်းတစ်ခု လာပါပြီ။ ဒီကားကတော့ အတော်ကောင်းပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ လော့စ်အန်ဂျလိမှာ ဖော်တီကိုဆိုတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိတယ်။ သူတို့တွေက ကာစီနိုတွေ၊ ကုန်တိုက်တွေကနေ ငွေတွေ သယ်ပို့ပေးတာတွေကို ဝန်ဆောင်မှုပေးတာပါ။ ငွေသယ်ကားတွေနဲ့ လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုပေါ့။ အမြဲတမ်း ဒေါ်လာ သန်းချီပြီးသယ်နေရတာဖြစ်တော့ ဓားပြတွေ မျက်စိကျတဲ့ ကားတွေပါပဲ။ တစ်နေ့မှာ ကားတစ်စီး ဓားပြတိုက်ခံရပြီးအစောင့်နှစ်ယောက် သေသွားခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက်မှာ လူသစ်ဝင်လာတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖိုက်တာကတုံးပေါ့။ ကတုံးဝင်လာပြီးပြီးချင်းဓားပြခြောက်ယောက် မသာပေါ်သွားအပြီးမှာ ကတုံးလည်း သူရဲကောင်းဖြစ်သွားတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူဝင်လာရတဆက ရည်ရွယ်ချက်တွေ၊ ဓားပြမှုတွေ နဲ့ ဓားပြတွေ ဘယ်လိုဆက်စပ်နေသလဲဆိုတာကို ဇာတ်လမ်းထဲမှာ အဖြေရှာကြည့်ရမှာပါပဲ Credit Review ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ WinSu LeiMyat ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi ေဂ်ဆန္ စေတသန္ႀကီးရဲ႕ အက္ရွင္ကား အၾကမ္းတစ္ခု လာပါၿပီ။ ဒီကားကေတာ့ အေတာ္ေကာင္းပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ ေလာ့စ္အန္ဂ်လိမွာ ေဖာ္တီကိုဆိုတဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခုရွိတယ္။ သူတို႔ေတြက ...
IMDB: 7.3/10 25390 votes